Dr. Tint Swe's Writings: Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ်
Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ်
ဆရာ Yaba က နယ်စပ်မှာထုတ်တယ်ဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေက နယ်စပ်မှာရှိတာလား။ ဘယ်ကုန်ကြမ်းတွေ သုံးတာလဲ။
Pseudoephedrine hydrochloride ကုန်ကြမ်းဆိုတာ တရားဝင်ရောင်းနေတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းတွေကို အိန္ဒိယနဲ့ တရုပ်ကနေလာတယ်။ ဈေးကလည်း ချိုတယ်။ ဆေးကို ကပ်လိုက် မသယ်ဘူး၊ ဆေးပြားတွေထုတ် (ခွါ) ယူပြီး သယ်တယ်။ စိတ်ကြွဆေး စက်ရုံဆိုတာ လူတယောက်နေတဲ့အခန်းထက် ကျယ်စရာမလိုဘူး။
• Pseudoephedrine (PSE) ဆိုတာ Nasal/Sinus decongestant (ဆိုင်းနပ်စ်) ဖြစ်လို့ နှာခေါင်းပိတ်နေတာအတွက် ထည့်ဆေးအဖြစ် သုံးတယ်။
• Stimulant စိတက်ကြွဆေး။ နိုးကြားနေစေဘို့သုံးတဲ့ ဆေးပြားလဲဖြစ်တယ်။
• Antihistamines, Guaifenesin, Dextromethorphan, Paracetamol, Aspirin or Ibuprofen စတဲ့ တခြား ဆေးတွေနဲ့လဲ ရောပြီးသုံးတာ အတော်များများရှိတယ်။
• Antitussive drug ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးအနေနဲ့လဲသုံးတယ်။
• Casomotor rhinitis, Allergic rhinitis, Croup, Sinusitis, Otitis media, Tracheobronchitis တွေမှာသုံးတယ်။
• Priapism ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါသန်မာနေတာ ပြန်မကျနိုင်တာအတွက်လဲသုံးတယ်။
• Urinary incontinence ဆီးမလုံတာကိုလဲ ပေးတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကို နိုးကြားနေစတယ်၊ အိပ်မပျော်စေဘူး၊ စိတ်ဆောက်တည်မရသလို နေမယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်၊ ခေါင်းမူးမယ်၊ စိုးရိမ်နေမယ်၊ တချို့မှာတော့ နှလုံးခုန်တာမြန်ပြီး ရင်တုန်မယ်။
ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ သွေးတိုးသိပ်များသူ၊ နှလုံးသွားသွေးကြောရောဂါဆိုးနေသူ။ ယောက်ျားဆီးကျန်ကြီးနေသူ၊ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများနေသူ၊ ဒေါင့်ကျဉ်းရေတိမ်ရှိနေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ မပေးရဘူး။
Actifed, Aleve D, Allegra D, Allerclear-D, Benadryl Plus, Cirrus, Claritin-D, Codral, Congestal, Contac, Eltor, Mucinex D, Nurofen Cold & Flu, Rhinex Flash, Rhinos SR, Sinufed, Sudafed Decongestant, Theraflu, Unifed, Zyrtec-D 12 နာမည်တွေနဲ့ဆေးတွေမှာ ပါတယ်။
Pseudoephedrine ဆေးကို တရားမဝင်သုံးဆေးဖြစ်အောင်သုံးတာတွေရှိလာလို့ တားမြစ်မှုတွေ လုပ်နေရတယ်။ ပိုလံပစ်ပွဲတွေမှာ တားထားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေ တရားမဝင်လုပ်ဘို့ အိန္ဒိယကနေ အများဆုံး လာတယ်။ ဆေးပြာကပ်တွေကနေ ဆေးပြားတွေခွါထုတ်ပြီး အိပ်ကြီးအိပ်ငယ်တွေနဲ့ သယ်ပို့ပေးတယ်။
နောက်ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့ Methamphetamine အကြောင်း စာတပုဒ်သပ်သပ်ရေးပါအုံးမယ်။
Chinese tourists have the money, but not the manne...
Super-cheap gadget tests for HIV using Smartphone
Uniform ယူနီဖေါင်း (သို့) ကြောက်ရောဂါအဆက်
Giant pox ကြောက်ရောဂါ
Harvoni အသည်းရောင် (စီ) အတွက်ဆေး
Condoms Safety and Effectiveness (ကွန်ဒွမ်) ရဲ့ ထိ...
Condom new generation (ကွန်ဒွမ်) မျိုးဆက်သစ်လာတော့...
Condom Size Chart ကွန်ဒွမ် အရွယ်အစား
Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်)
Condom question မေးခွန်းတခု
Condom and STDs (ကွန်ဒွမ်) သုံးပေမဲ့ ကူးနိုင်တဲ့ရေ...
Cut music to an houraday
Duties of Government အစိုးရကျင့်ဝတ်ငါးပါး
Quality Education again
Counteraction မြန်မာပြည်မှာ တန်ပြန်တွေကများ
Mysterious disease ဘာရောဂါလည်း
Secret Letters အစိုးရပြုတ်ကျအောင် အစပျိုးပေးတဲ့စာ
Village life အုန်း ထန်း ငှက်ပျော၊ လက်ပံပေါ၊ ကျွန်ေ...
Sweet dreams အိပ်မက်ချိုချိုမက်ပါစေ
Rural beauty တောလား
Ocean of Fire race မီးပင်လယ်ဖြတ်ကျော်တဲ့အမျိုး
Video proof ပုလဲသက်သေ (သို့) ၃ ဆတိုးကြိုးပမ်းနေ
Renal Dialysis ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း
Betel chewing tradition ကွမ်းဓလေ့
Snow land wishes နှင်းထုဆုတောင်း
Jail proof jacket သတင်းထောက်သတင်း
Bi Midday News Journal 20-1-2014 Interview
Salaries of MPs အမတ်လစာ
Youth empowerment လူငယ်တွေအတွက်သင်တန်း
My dear friends သူငယ်ချင်းတို့ရေ
United Wa State Army ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော...
Laogai (Laukkal) လောက်ကိုင်ကို ဘာကြောင့်ထိုးကျွေးလ...
Big Government အစိုးရအကြီးစား
Wealthy media မြန်မာ့ အယ်လ်ဂျာဇီးရာ
Heart donor နှလုံးအလှူရှင်
My Friends သူငယ်ချင်းတွေ
Parliamentarians နောက်ဖေးလမ်းကြားနဲ့တန်တဲ့ အမတ်မျာ...
Old and new အဟောင်းနဲ့ အသစ်
Mango garden sermon သရက်ဥယျာဉ် တရားတော်
Malaria on Myanmar-India border is huge threat
Nayphyitaw land abuse နေပြည်တော် နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်...
HIV အတွက် ART ဆေးများ
Sony နဲ့ ခရိုမီ
Drugs used in the military စစ်သုံးဆေးများ
Blazing Snow မီးလောင်နေတဲ့ နှင်းတော
Medical Ethics Vs Political Ethics ရောဂါတွေသိတဲ့ ဆ...
My native ကျွန်တော့်ရွာ
Come again ဆရာ လာအုံးမှာလား
Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး မော်လီဆေးပြာ...
Today ကနေ့ဘာတွေ ရေးဖြစ်သလည်း
Family spacing သားသမီးတယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လောက်ခြာသ...
Spelling အစိုးရသတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့
Kokang ကိုးကန့်သတင်း အဆက် (၂)
Grammar and Spelling မြန်မာစာ သဒ္ဒါနဲ့ သတ်ပုံ
March 19, 2013 Prospect Burma English language Sch...
Kokang battle (2) ကိုးကန့် (အဆက်)
History of Burma ဗမာ့သမိုင်း
Provocative Headlines သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ဒေါသခေါ် သတင...
Lymphoma (လင်ဖိုးမား) ရောဂါ
Royal carriage ဖုတ်သွင်းရထား
War news စစ်တွင်းသတင်းများ
Spelling Comments (2) သတ်ပုံမှား ကွန်မင့်များ (၂)
Kokang background ကိုကန့်နယ်မြေသမိုင်း
The voyage ဤခရီး နီးသလား
Kokang by US-based Chinese TV အမေရိကန်အခြေစိုက် တရ...
Chinese embassy on Kokang ကိုးကန့်အရေး တရုပ်သံရုံး...
Kokang (2) ကိုးကန့်နယ်မြေ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပြဿန...
Wise decision ဥာဏ်ကောင်းတယ်
Seasonal job ဈေးကောင်းရတဲ့အလုပ်
The President သမတကို ထောက်ခံတယ်
Not to be fooled အို့့ ကာလာမတို့
Be encouraged အားပေးသူတွေများတယ်
Phone Kyar Shin ဖုန်ကြားရှင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
Who said so ဘယ်သူပြောတယ်လို့ ထင်ကြပါသလည်း
Disciplined Democracy စည်းကမ်းကို စည်းကမ်းမရှိမသုံ...
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဦးပိုင်လီမိတက် (၄)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဦးပိုင်လီမိတက် (၃)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဦးပိုင်လီမိတက် (၂)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဦးပိုင်လီမိတက် (၁)